Namni Galaanaan Nyaatame Hoomacha Qaqqabata – Kutaa 2 |
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 07, 2017
Diinni diinummaa qabuuf ummata keenya argaa fi dhageettis dadhaba. Dhala Oromoo cufa miidhuu yoo barbaade ABO ittiin jedha. Firri farroomee diina waliin ABO balaaleffatu ykn argaa fi dhageettii isaa jibbu hoo maal jedhama laata? Deebii kanaa namootuma Oromoo kan dhaaba kana jibbaniif dhiisa. ABOn kan jibbu diina qabsoo saba isaa dura dhaabbatu qofa. Farren qabsoo ni komata malee hin jibbu. Har’a jallatan boru qajeeluu danda’an abdii jedhu waan qabuuf akka isaan isa jibban sanatti inni isaa hin jibbu. Akkuma abbaan ilmaan ofii qajeelaa fi jalatas jaalatu/jibbuu hin dandeenye sana jechuudha. Kessumaa yeroon ammaa yeroo inni dhala Oromoo cufa gara qabsichaatti hawachaa jiruudha. Kan isa jibbise jaalatee kan isa abaares eebbisee, kan isatti aares araarfatee qaama qabsoo taasisuudhaaf sochii oowwaa keessa jiruudha.
Namootni akka matayyaattii fi akka gareetti yeroo ammaa kana keessa dhaaba kana irratti daaraa haran kasaaraa keessaa bahuu hin dandeenye keessa jiru. Dhaaba haqa irratti mirga saba keenyaaf dhaabbatee bara dheeraa qabsoo kana irratti umrii isaa fixate fafeessuuf yaaluun afoollummaadha. Qabsoon Oromoo sarara xumuraa irra gahee jira. Gantuun hattuun, hamattuun, jallattuu fi hinaaftuun rakkoo keessatti hafnaan bal’ina keessattiyyuu hin dhabamtu. Gurri saba bal’aa garuu isaan hin caqasu. Fedhii fi hawwiin ummata Oromoo walabummaa fi bilisummaa qofa. Rakkooleen matayyaas yoo jiraatan kana booda furmaata argatu amantaa jedhu qaba. Ammaa achi Oromoon wal reebbata malee wal hin reebu. Wal jaalata malee wal hin jibbu. Kanaaf, namootni akka dhuunfaatti qabsoo kanatti abbaa ta’uuf hamilanis hooggana ta’uuf wareegama lubbuu baasuuf of qopheessuu qabu. Of qopheessuu qofa osoo hin taane hojiidhaanis lafa irratti of mul’isuu qabu.
Hooggana dhaaba kanaatti arrabaan duuluun qofti qabsaawaa nama hin taasiftu. Hinaaffaa hojii kan jibbansi keessa hin jirre yoo qabaatan Oromiyaan bal’oodha waan ta’eef dirree qabsoo seenanii qabsaawuu namni isaa dhoorgu hin jiru. Nuti boru hooggana Oromoo ta’uuf of qopheessinaa isin du’aa nu walaboomsaa jechuun ammoo harka nama biraatiin ibidda qabachuudha. Hooggana dhugaa ta’uuf hadhaa qabsoon qabdu hunda dhandhamuu danda’uudha. Waan ofii gochuu hin feenee fi hin dandeenye nama biraa raawwachiisuuf wacuun hin barbaachisu.
Walabummaa fi bilisummaan wareegama lubbuu malee argamtu hin jirtu. Faranjoota kadhachuun akka badhaasaatti biyyi walaboomtee fi ummatni bilisoome seenaa hawaasa addunyaa biyya lafaa keessatti takkaa hin jirreedha. Dhugaa himachuu fi alagatti boohuun yeroo ofii gubuun hin barbaachisu. Saba humnaawaa fi jabaa hawaasni addunyaa gurra jala qabata. Itti hajama, hajas baasaaf. Ummatni keenya amma humnoome. Jabina waaraa horachuu qofatu isa hanqate. Ulaagaa kana gutachuuf dhaaba isaa ABO waliin hiriiree wareegama qaalii waloon baasaa jira. Kun murna gabroomfatatti martoo ta’ee jira. Farreen qabsoottis dimimmisaawee jira. Yeroo diinni keenya waan qabatuu fi dhiisu dhabee akka nama galaanaan nyaatameetti asii fi achi hihiixatu kana keessatti dhalli Oromoo diina waliin asii fi achi hiixatus galgalli isaa kufaatii dandama hin qabneen akka xumuramu beekuu qaba.
Dhimma olola ooftota ilaalu irratti kana caalaa waa jechuu hin barbaadu. Nama saba balaaleffatu balaaleffachuun of xiqqeessuudha. Dawaan namoota akkasii yoo galeefiif gorsuu fi dammaqsuudha. Didan ofiinuu duutii maaf of huuti akkuma jedhamu hiree isaan mudachuuf taa’u itti dhufanii akka argan taasisuudha. Kanaaf namootni bifa fedheenuu haa ta’uu hooggana dhaabaa irratti olola addaan hin citne oofan gochaa hameenyaa boru itti sheenahuuf jiraatan kana irraa hatattamaan akka dhaabbatan gorsa.
Dhala Oromoo walii galaa irraa yeroo amaatti kan eeggamu mootummaa Tigree gamtaan awwaaluudha. Balaan lolaa ollaan nutti ka’es furtuun isaa abbaa balaa dhabamsiisuu qofa. Gurri Oromoo keessaa alaan wal dhagahe humnatti jijjiramee jabaatee galaana wayyaanee fi farreen qabsoo kanaa ta’an hunda dhabamsiisu akka ta’u abdiin qaba. Oromoo Oromoo diigguuf Oromoo balaaleffatu arrabni haa citu.
Walabummaa fi bilisummaan dhiiga keenyaan ni dhugooman!
ABOn, WBO Fi QERROOn saba Oromoo bal’aadha. Hoogganni ABO haa jiraatu!
Warra waan hamile argatu Rabbi nu haa taasisu!
Kutaa 1: Namni Galaanaan Nyaatame …